आज कतिमा बिक्री भइरहेको छ सुनचाँदी ? जान्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»अर्थ»आज कतिमा बिक्री भइरहेको छ सुनचाँदी ? जान्नुहोस
आज कतिमा बिक्री भइरहेको छ सुनचाँदी ? जान्नुहोस
By मनिषा थापा on २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०६:०२ अर्थ
साताको चौथो दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यथावतै रहेको छ । बुधबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ५८ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि सुन प्रतितोला ५८ हजार २०० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै, बिहीबार चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार बजारमा चाँदी प्रतितोला मूल्य ७१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि बढेर चाँदी प्रतितोला ७२० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ।